यो सुविधा लिने बेला पक्कै होइन, कर्मचरीको स्वास्थ्य ठूलो कुरा हो, त्यसबारे बैंक सचेत र चनाखो छ - Wnepal.com
रमेश अर्याल, सीईओ, एनसीसी बैंक लिमिटेड
रमेश अर्यालय नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन आधा जीवन नै बैकिङ्ग क्षेत्रमा विताएका रमेश अर्याल नेपालको ८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको सबल र सक्षम बैंक एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।
अर्यालले एनसीसी बैंक सम्हाले पछि बैंकले विद्यमान चुनौती र अप्ठ्यारालाई पार गर्दै बैंकको पूँजी मात्र पुर्याएनन् । बैंकको काँचुली फेर्ने काम गरे भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । उनीकै नेतृत्वमा ४ वटा विकास बैंक मर्ज भएर एउटा सक्षम, सबल र अब्बल बैंक बन्यो एनसीसी बैंक ।
विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल पनि अछुतो छैन । केही संकेतहरु देखिएका छन् । वैशाख ३ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।
यो अवस्थामा पनि नेपालको निजी क्षेत्रको ठूलो एनसीसी बैंक लिमिटेडले सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको एनसीसी बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार गर्न केही शाखाहरु संचालन गरि नेपालभर सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु छन् ?
शाखा खुलेको मात्रै छ कि कारोबार छ । बैंकको कर्मचरीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ । आगामी चैत्र महिनामा आउने बैंकहरुको वित्तिय विवरणमा कोरोना भाईरसले कस्तो असर गर्ने देखिन्छ र कारोना बिरुद्ध लड्ने राज्य कोषमा एनसीसी बैंकले के कस्तो राहत दिएको छ । यिनै र यस्ता विषयमा चर्चित बैंकर एवं एनसीसी बैंक लिमिटेडका सीइओ रमेश अर्यालसंग भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः
० सीइओ सर देश लकडाउनमा छ, नेपालमा कोरोना भाईरसका केही लक्षण पनि देखा परेको छ । यो विषम अवस्थामा कस्तो सेवा दिनु भएको छ ?
एनसीसी बैंकले १२२ वटा शाखा सञ्जाल मध्ये ४०/५० वटा शाखा खोली देशभरी ग्राहकलाई सेवा दिएको अवस्था छ । कारोबार घटेको छ । हामीले हाम्रो वेवसाईटमा स्टाफको नाम, नम्बर र शाखा खोल्ने सूचना दिएका छौं । अहिले एटिएम र मोबाइल बैकिङ्गबाटै कारोबार भएको अवस्था छ । कार्ड नभएका सूचना प्रविधिका एप नलिएका ग्राहकका लागि १० बजेदेखि १ बजेम्म शाखा खोली सेवा दिएका छौं ।
० करिब ५० शाखा खोली देशभरी सञ्चालन गरेको बताउनु भयो । यो महामारीको बेला कर्मचारीहरुको स्वास्थ्यका बारेमा कति सचेत हुनुहुन्छ नि ?
सचेत मात्रै छैन । सावधानीपूर्वक काम गरेका छौं । ल्याउने पुर्याउने देखि लिएर सुरक्षाका सबै उपायका बस्तु हामीले कर्मचरीलाई दिएक छौं । भीडभाड छैन । कारोबार कम छ तापनि अत्यावश्यक सेवा भित्र बैंक र वित्तिय क्षेत्र पर्न आएकोले सेवा दिने दायित्व हामी बैंकरको छ । यो विशम परिस्थितिमा हामीले कर्तव्य निष्ठाका साथ सेवा दिएको अवस्था छ ।
० यो विशम परिस्थितिमा बैंकसम्म पुगी काम गर्ने कर्मचरीहरुको लागि विमा लगायतका सहुलियतका प्याकेज ल्याएको हो र ?
यो अत्यन्तै आप्ठ्यारो र विशम परिस्थितिमा सबै कर्मचारी साथीहरुले पनि योगदान दिने हो । सुविधा लिने बेला पक्कै होइन । कर्मचरीको स्वास्थ्य ठूलो कुरा हो । त्यसबारे बैंक सचेत छ । चनाखो छ । यो बेला बैंकबाट भन्दा पनि एटिएम र मोबाइल बैंकिङ्गबाटै कारोबार हुने गरेकोले कम कर्मचरीले काममा पठाएको अवस्था छ ।
० कर्मचारीहरुलाई भोलि केही भैहाल्यो भने बैंकले कसरी लिन्छ त ?
यो बेला बैंक सबै कुरा गर्न तयार छ । हामीले लकडाउनको पैसा कटाएको छैन । उहाँहरुको स्वास्थ्यबारे बैंकले ख्याल गर्ने कुरामा दुई मत छैन ढुक्क भए हुन्छ ।
० कोरोना विरुद्ध लड्न राज्यको कोषमा एनसीसी बैंकको योगदान चाहि कस्तो छ नि ?
हामीले पनि राष्ट्रिय कोषमा ६५ लाख र ७ वटै प्रदेशमा ५/५ लाख गरि ३५ लाख दिएका छौं । सत्रै मिलाएर १ करोड पठाएका छौं । हिजो आपत पर्दा हामीले राज्यलाई साथ दिएकै हौ । आज पनि दिने छौं । भोली पनि दिने हो । त्यसकारण हामी सबै मिलेर विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस बिरुद्ध लड्नु नै आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
० सीइओ साब चैत्र मसान्तमा बैंकहरुको वित्तिय विवरण आउँदै छ । त्यसमा यो लामो लकडाउनले कस्तो असर पर्ला ?
ग्राहक, प्रोमोटर, शेयरधनी र आम नेपालीहरुको स्वास्थ्यको ठूलो कुरा हो । यो बेला नाफा, नोक्सानको कुरा होइन । पहिला यो बुझ्नु जरुरी छ । त्यसपछि नाफा कमाउला नि । नाफा कमाउनु सकिन्छ । हिजो भुकम्प र नाकाबन्दी पछि पनि हामीले काम गरेर नाफा कमाएको इतिहास छन् । त्यसकारण जीवन रहे बैंक रहने हो ।
बैंक भए त नाफा कमाउने हो । त्यसकारण घरबाट सूचना प्रविधीका उपायहरुबाट मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्गबाट कारोबार गर्न म आग्रह गर्दछु । एटिएमबाट औषधी र खाद्यन्नका सामान किन्ने पैसा झिक्नु उचित होला । बैंक आउने काम यो बेला गर्न उचित हुँदैन । घरमै बसी राज्यले दिएको निर्देश्न पालना गरौं र आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत र सजक बनौं ।
० कोरोना भाईरसका कारण भएको लामो लकडाउनबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ ?
अत्यन्तै राम्रो प्रश्न सोच्नु भयो । हामी नेपालीले इतिहास पल्टाउने हो भने सबैकुरा देख्न पाएका थियो जस्तै नाकाबन्दी भूकम्प, राजनीतिका कुरा, समाज परिवर्तनका कुरा तर आज सोच्दै नसोचेको रोगसंग लड्नु परेको छ । यसैका कारण जीवनमा नदेखेको लकडाउनमा हामी छौं । यसको पालना जति राम्रो हुन्छ । यति नै हामी सुरक्षीत हुनेछौं ।
सरकारले समयमै लकडाउन गरेकाले हामी सुरक्षीत छौं । अहिले हाम्री भन्दा महान र शक्तिशाली राष्ट्रले पनि आपत खेपीरहेका छन् । सबै बन्द भए नाका देखि उडानसम्म यसले मानव जीवनमा कमी क्षती देखियो, अब औषधी उपचार र अस्पतालका भौतिक संरचनामा जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि हामी बैंक र सबै बैंकर तयार छौं । हामी यहि समाजका मान्छे हौ । समाजमा हाम्रो दायित्व अझै बढेको छ । त्यसकारण जनता बचाउन, आफू र परिवार बचाउन राज्यसंगै हातेमालो गर्न बैंकिङ्ग उद्योग तयार छ नि ।
० फेरि लकडाउन बढेको छ । राज्यले ग्राहकहरुका लागि ल्याएको सहुलियतका योजना पर्याप्त छन् । यो बेला सीइओ साब ?
शुरुका दिनलाई त ठीक नै थियो । तर, अब चाहि अध्ययन गरेर अगाडी बढ्नु पर्यो नि । कुन क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ । त्यो पहिला अध्ययन गरिनु पर्दछ र पुनः राहतका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
पर्यटन ठप्प छ । कर्जा लिएका ऋणीले किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नाजुक छ । घर धनीले घरभाडा छुट दिएपछि कर्जाका किस्ता आउने स्रोत बन्द हुने अवस्था होला । यी सबै विषयमा गम्भीर भएर चिसो दिमागले राष्ट्र बैंक, हामी बैंक र राज्य बसेर छलफल हुनु जरुरी पक्कै छ ।
० अहिले एटिएम चलेका छन् तर, पैसा नभएको कोरोना सुरक्षीत नभएको र साँझ परेपछि बन्द भएका गुनासो सुनिन्छ के यो सत्य हो ?
सबै झुट हो । एटिएम भनेकै कहिल्यै बन्द नहुने बस्तु हो । पहिलो कुरा दोस्रो कुरा पैसा सधै एटिएममा हुन्छ । यसको मनिटरिङ्ग बैंकहरुका केन्द्रीय अफिसबाट चौविसै घण्टा हुन्छ । तेस्रो कुरा सुरक्षाको छ । त्यहाँ पनि सुरक्षाको प्रबन्ध बैकहरुले मिलाएका छन् । एटिएमलाई पनि सेनिटाईजिङ्ग गरिएको छ । तापनि घरबाटै कारोबार गर्नु सुरक्षित रहुन हो । यो बिर्सनु पटक्कै भएन नि ।
० अर्थतत्रमा कोरोना भाईरसको असर कस्तो होला त ?
यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र हान्ने निश्चित छ । अब अध्ययन गरी सहुलियतका राम्रा प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । हामीले थेगेकै हो । भूकम्प, नाकाबन्दी त्यसकारण धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था नआउला तर, विश्व बजारले चुनौति सामना गरेको बेला हामीलाई पनि छुने त पक्कै छ । अर्को कुरा जहाँ चुनौती छ । त्यहाँ अवसर पनि हुन्छन् । त्यो अवसरको पाठ सिक्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
० अन्त्यमा लाखौ ग्राहक, कर्मचरी, प्रोमोटर, शेयरधनी र जनतालाई केही भन्नु छ त ?
सबै भन्दा पहिला घर–परिवार होसियार भएर बसौ । रोगबाट टाढा बसौ । सूचना पालना गरौं । सबै स्वास्थ्यका कुरामा ध्यान दिउ ।
आज कोरोना भाईरसका कारण विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुमा भएको क्षतीको अध्ययन गरौं । त्यसकारण सरकारले गरेको लकडाउन पूर्णरुपमा पालना गरौं घरबाटै काम गरौं घरबाट वाहिर नजाउ ।
आफ्नो जीवनलाई बचाउने र अरुको जीवन बचाउ । साथै डब्लुएचओले भनेका सबैकुरा ध्यान दिएर पूरा गरौं । सोसल डिस्टेन्स पालना गरौं । मोबाइल बैकिङ्गबाट, इन्टरनेट बैकिङ्ग घरबाट कारोबार गरौं । राज्यले थप गरेको लकडाउन कठिन भए पनि पालना गरौं । यसले सबैको स्वास्थ्य सुरक्षीत हुनेछ ।